စိမ့်စမ်းရေ: သင့်အကောင့်လုံခြုံရေးအတွက် သင်ဒါတွေသိဖို့လိုတယ်
Security အပိုင်းတွေ တိုးတက်မြင့်မားလာတာနဲ့အမျှ Hacking နည်းပညာတွေလည်း တိုးတက်မြင့်မားလာမှာပါဘဲ။အဲ့လိုဘဲ Hacking နည်းပညာတွေတိုးတက်လာတာနဲ့အမျှ Security အပိုင်းတွေလည်း သူ့နဲ့အပြိုင် တိုးတက်လာကြမှာပါဘဲ။အဲ့တော့ မည်သည့်အကောင့်ဘဲဖြစ်ဖြစ် ဘယ်လိုမှ ဟတ်ယူလို့မရဘူးဆိုတာမရှိသလို မည်သည့်အကောင့်ကိုမှလည်း လွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ ဟတ်ယူလို့၇တယ်ဆိုတာ မရှိပါဘူး။ဆိုလိုတာက အကောင့်တစ်ခုရဲ့ လုံခြုံမှုရာခိုင်နှုန်းဟာ အသုံးပြုသူပေါ်မှာဘဲ မူတည်ပါတယ်။ဟတ်ကာတစ်ယောက်ဟာ အကောင့်တစ်ခုကိုဟတ်တော့မယ်ဆိုရင် အဲ့ဒီအကောင့်ကို ဟတ်လို့ရမယ့် နည်းလမ်းတွေအကုန်လုံးကိုသုံးမှာပါဘဲ။အသုံးပြုသူအကောင့်ပိုင်ရှင်ရဲ့ Security မြင့်မားမှုပေါ်မူတည်ပြီး ဟတ်ကာတစ်ယောက်ရဲ့ထိုးဖေါက်မှုတွေဟာလည်း ပိုမိုပြင်းထန်လာမှာပါဘဲ။
ဒါကတော့ လူမှုကွန်ယက် မှာရော ဟတ်ကင်းလောကမှာပါ နာမည်ကြီးတဲ့ နည်းလမ်းလေးပါ။မိမိ Target ထားထားတဲ့သူကို အယုံသွင်းပြီး မိမိဆင်ထားတဲ့ကျော့ကွင်းထဲဝင်ရောက်လာအောင် လှည့်စားတဲ့နည်းလမ်းတစ်ခုပေါ့။ဥပမာပြောရရင် မြန်မာဇာတ်ကားတွေထဲမှာ ခဏခဏ ပါပါတယ်။လူကြမ်း ဦးအောင်ခိုင် က သူတပည့်တွေကို အရမ်းစိတ်ပူပမ်နေတဲ့ မင်းသား ရဲ့ နောက်လိုက်တွေနဲ့ ပုံစံတူ Phishing တစ်ခုကို ဖန်တီးပြီး မင်းသမီးဆီကို သွားခိုင်းခဲ့ပါတယ်။မင်းသမီးယုံကြည်လာအောင် မင်းသားကားမှောက်လို့ ဆေးရုံေ၇ာက်နေတဲ့အကြောင်း နဲ့ ဒါဏ်ရာအရမ်းများလို့ အခုချက်ချင်း လိုက်ခဲ့ဖို့ လှည့်စားခေါ်ဆောင်ပါတယ်။ဒါကိုမသိတဲ့ မင်းသမီးက သူ့ချစ်သူ တကယ် ဆေးရုံရောက်နေတယ်ထင်ပြီး လိုက်သွားတဲ့အခါ လူကြမ်းတွေဆင်ထားတဲ့ ကျော့ကွင်း ( အမြဲတန်းရိုက်ဖြစ်တဲ့ မှော်ဘီက ဆန်ဂိုဒေါင်အပျက်ကြီး ) ထဲရောက်သွားခဲ့ရတော့တာပါဘဲ။ဒါဟာ Phishing ကိုသုံးပြီး တိုက်ခိုက်တဲ့ Social Engineering တစ်ခုပါ။ဟိုတစ်ခေါက်က ကျွန်တော်ပြောပြခဲ့ဖူးပါတယ်။Phishing ဆိုတာ Web Page တစ်ခုပြုလုပ်ပြီး ကိုယ်ဟတ်မယ့်သူဆီကို ပို့ပေးရတာမျိုးပါ။အဲ့ဒီမှာ မိမိ ရဲ့ Target က မိမိပြုလုပ်ထားတဲ့ Fake Web Pag မှာ Login ဝင်လာအောင် လှည့်စားစွဲဆောင်ရပါတယ်ဆိုတာ ... ။Facebook Hacking Using Phishing ဆိုတဲ့ ပို့စ်လေးကို သွားပြန်ဖတ်ကြည့်လိုက်ရင် Phishing ဆိုတာကို ပိုပြီးသဘောပေါက်သွားပါလိမ့်မယ်။အကောင့်တွေကို ဟတ်တာ အဲ့ဒီ Phishing နည်းပညာတစ်ခုထဲလားဆိုတော့လည်း မဟုတ်သေးပါဘူး။နည်းလမ်းတွေက အများကြီးရှိပါတယ်။ကျွန်တော်က ဟတ်ကာတစ်ယောက်မဟုတ်တော့ ဟတ်ကာတွေဟာ ဘယ်လိုနည်းတွေသုံးပြီး ဟတ်တယ်ဆိုတာ ကျွန်တော် အကုန်လုံးမပြောပြနိုင်တာတော့ နားလည်ပေးစေချင်ပါတယ်။ဒါပေမယ့် အများစုကတော့ Keylogger လိုမျိုး Spye Software တွေသုံးပြီးလည်း ဟတ်ကြပါသေးတယ်။
Keylogger ဆိုတာ ဘာလဲ ?
Keylogger ဆိုတာ ကွန်ပျူတာတစ်လုံးမှာ မိမိလုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့ မိမိရဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်တိုင်းကို မှတ်သားထားပေးပြီး စက္ကန့်မလပ် ကြိုးကိုင်သူပိုင်ရှင်ဆီကို အချက်အလက်တွေ ပို့ပေးတဲ့ အရာပါ။သူမှာ Software Keylogger နဲ့ hardware keylogger ဆိုပြီး နှစ်မျိုးရှိပါတယ်။hardware keylogger ကို ကွန်ပျူတာရဲ့ motherboard နဲ့ keyboard ကြိုးနဲ့ဆက်သွယ်ထားတဲ့ နှစ်ခုကြားမှာ လွယ်ကူစွာရှာဖွေနိုင်ပေမယ့် Software Keylogger ကိုတော့ ရှာဖွေဖို့မလွယ်ကူပါဘူး။
Hardware Keylogger ကို ပုံမှာတွေ့ရတဲ့အတိုင်း တပ်ဆင်အသုံးပြုကြပါတယ်။သူဟာ မိမိတို့ Keyboard မှာ ရိုက်လိုက်တဲ့ စာလုံးတွေအားလုံးကို Monitor ပေါ်မရောက်ခင်ကာလအတွင်း ကြားကဖြတ်ယူ မှတ်သားတဲ့အလုပ်ကို လုပ်ဆောင်တဲ့အတွက် မိမိတို့ ရိုက်လိုက်သမျှ User name , Password , Bank Account , Ph Number , ID Number အစရှိတဲ့ အရေးကြီးတဲ့ အချက်အလက်တွေအားလုံးဟာ သူရဲ့ memory ထဲကို ရောက်ရှိသွားပါတယ်။
Hardware Keylogger ဟာ မျက်စိနဲ့မြင်ရတဲ့အရာဖြစ်တဲ့အတွက် ရှာဖွေရတာ အရမ်းလွယ်ကူပါတယ်။အင်တာနက်ဆိုင်မှာအသုံးပြုတဲ့သူတွေအတွက်တော့ မိမိအသုံးပြုမယ့်စက်ကို မိမိအသုံးမပြုခင် Keylogger ရှိ မရှိ ( ဆိုင်ရှင်မသိအောင် ) တိုးတိုးတိတ်တိတ် စစ်ဆေးပြီးမှ အသုံးပြုသင့်ပါတယ်။Hardware Keylogger ဟာ Keyboard ပေါ်မှာ ရိုက်လိုက်တဲ့ စာလုံးမှန်သမျှကို မှတ်သားထားနိုင်တယ်ဆိုပေမယ့် မိမိတို့ ကွန်ပျူတာမှာပါတဲ့ Program တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Screen Keyboard မှာ ထောက်ပြီး ရေးတဲ့စကားလုံးတွေကိုတော့ မှတ်သားနိုင်စွမ်းမရှိပါဘူး။Screen Keyboard ကိုအသုံးပြုချင်တယ်ဆိုရင်
Start Menu \_ All Program \_ Accessories \_ Accessibility \_ On Screen-keyboard
Softward keylogger ကတော့ ကျွန်တော်တို့Gtalk တွေ ဘာတွေ ဒေါင်းသလိုဘဲ ကွန်ပျူတာထဲကို ဒေါင်းလုစွဲပြီး ထည့်သုံးရတဲ့အရာပါ။သူကကျတော့ စောစောက လိုမျိုး ကီးဘုတ်ပေါ်မှာရိုက်တဲ့စာတွေကိုဘဲ မှတ်သားပေးတာမဟုတ်တော့ဘဲ အင်တာနက်ပေါ်မှာ မိမိသွားသမျှ လမ်းကြောင်းတွေအကုန်လုံးကိုပါ မှတ်သားနိုင်စွမ်းရှိပါတယ်။တချို့ဆိုရင် Screen Shot ရိုက်ပြီးတော့ပါ မှတ်သားပေးနိုင်တဲ့အထိ အဆင့်မြင့်ပါတယ်။သူက Spy Software တစ်ခုဖြစ်တဲ့အတွက် ရှာဖွေယူဖို့မလွယ်ကူပါဘူး။သူဟာ သူရှိနေတာကို သူမဟုတ်သလို နေတက်ပါတယ်။ဥပမာ ... ဟတ်ကာ က သူ့ Keylogger Software ကို ကွန်ပျူတာမှာ ရှိလေ့ရှိတဲ့ ရိုးရိုးသာမန် Program တစ်ခုရဲ့ နာမည်ကို သုံးပြီး ထည့်ထားမယ်ဆိုရင် ကျွန်တော့တို့ Task manager ခေါ်ပြီးကြည့်ရင်တောင် သူ့ကို Keylogger အနေနဲ့
Ctrl + Alt + Delete key သုံးခုကို တွဲနှိပ်ပြီး Task manager ခေါ်ပါ။ပြီးရင် အပေါ်က Tab တွေထဲက Process ID ဆိုတဲ့ Tab ကို သွားပါ။အဲ့မှာ အခုလက်ရှိ Run နေတဲ့ Program တွေကို တွေ့ရပါလိမ့်မယ်။
ကိုယ်မသင်္ကာတဲ့ Program တွေကို ကလစ်ပေးပြီး End process လုပ်ပေးပါ။Update ဖြစ်တဲ့ Antivirus ကောင်းကောင်းတစ်ခုနဲ့ Scan ဖတ်ပေးပါ။(အင်တာနက်ဆိုင်မှာ အဲ့လိုလုပ်ဖို့က နည်းနည်းတော့ခက်မယ်ထင်တယ်)
သူကတော့ မိမိတို့ကို Anti keylogger ပါ ... Anti Phishing ပါ ... Add-on လုပ်ထားပါ လို့ ကြေညာပြီး မိမိ ကို ဒေါင်းလု လုပ်ခိုင်းပါတယ်။မိမိက ယုံကြည်ပြီး လုပ်လိုက်ရင်တော့ မိမိအကောင့်ရဲ့ User name နဲ့ Password တွေဟာ ဟတ်ကာ ဆီကို ရောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆို သူလည်း Social Engineering ဘဲပေါ့။အမှန်ပါဘဲ။မိမိတို့ ရဲ့ ကာကွယ်လိုစိတ်ကို အခွင့်အရေးယူပြီး မိမိတို့ကို လှည့်စားပြီး
သူတို့ရဲ့ကျော့ကွင်းထောင်ခြောက်ထဲကို မရောက်ရောက်အောင် စွဲဆောင်တာပါ။အပေါ်မှာ ကျွန်တော် ပြောခဲ့သလိုပေါ့။ဟတ်ကာတစ်ယောက်က အကောင့်တစ်ခုကိုဟတ်တော့မယ်ဆို အဲ့ဒီအကောင့်ကိုဟတ်လို့ရမယ့် နည်းလမ်းအားလုံးကို အသုံးပြုကြမှာပါဘဲဆိုတာ ... မှတ်မိကြဦးမယ်ထင်ပါတယ်။တစ်ခုရှိတာက သူက Add-on ဖြစ်တဲ့အတွက် မိမိတို့ Add-on လုပ်ထားတဲ့ Browser မှာ မိမိတို့လုပ်ဆောင်တဲ့အချက်အလက်ကိုဘဲ မှတ်သားပါတယ်။သူမှတ်သားတာကတော့ များသောအားဖြင့် User name နဲ့ Password ဘဲပေါ့ဗျာ။
အင်တာနက်ဆိုင်မှာ မိမိတို့အသုံးပြုတော့မယ်ဆိုရင် တွေကိုလည်း သေချာစစ်ပေးဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။
Mozilla Fire Fox မှာ စစ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ Setting \_ Tool \_ Add-on \_ Extensions
Google Chrome စစ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ Settings ကိုဝင်ပြီး Extensions မှာ စစ်ကြည့်နိုင်ပါတယ်။
Fake Google Talk
သူကတော့ အသုံးပြုသူတို့ကို မျက်စိမှားပြီးဝင်ရောက်လာအောင် Computer Dasktop ပေါ်မှာ Gtalk အစစ်ပုံစံမျိုးနဲ့ တင်ထားတက်ပါတယ်။အဲ့လို Fake Gtalk မျိုးမှာ Login ဝင်မိတယ်ဆိုရင်
ဟော့သလိုလေး ပေါ်လာပြီး မိမိတို့ရဲ့ User နဲ့ Password ဟာ
ဟော့သလိုလေး ဟတ်ကာ ဆီကို ရောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။သူကလည်း Phishing လိုသဘောမျိုးပါဘဲ။
Gtalk အတု အစစ် ဘယ်လိုခွဲခြားသိနိုင်မလဲ ?
သူကတော့ အရှင်းဆုံးနဲ့ အလွယ်ဆုံးပါဘဲ။နည်းလမ်းသိသွားရင်တော့ လွယ်ကူသွားတာပါဘဲ။အတု အစစ်ခွဲခြားဖို့အတွက် ၎င်း Gtalk icon ပေါ်မှာ Right Click ထောက်ပြီး Properties ကိုသွားလိုက်ပါ။Application မှာ ကြည့်ကြည့်ရင် အတုမှာ ဘာ Application မှမရှိဘဲ အစစ်မှာတော့ Application လေးတွေရှိနေတာကို တွေ့ရပါလိမ့်မယ်။Phishing Fake Login page မှာဆိုရင်လည်း Address Bar မှာရှိတဲ့ လင့်ကိုကြည့်ပြီး ခွဲခြားနိုင်ပါတယ်။Fake Web Page ဆိုရင် မိမိတို့ ပုံမှန်ဝင်နေကြ Link မဟုတ်ဘဲ ... အခြားလင့်တစ်ခုဖြစ်နေတာကို တွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ဒါဆိုရင် Phishing ပေါ့ဗျာ။
မိမိတို့ အင်တာနက်ဆိုင်မှာအသုံးပြုတဲ့အခါ Login ဝင်တဲ့ User name နဲ့ Password ဆိုတဲ့နေရာလေးအောက်က Remember Password မှာ အမှန်မခြစ်မိဖို့အရေးကြီးပါတယ်။
User name တွေ Password တွေ နဲ့ အခြား အရေးကြီးတာတွေ ရိုက်ချင်တဲ့အခါ တိုက်ရိုက်မရိုက်ဘဲ Windows မှာ အသင့်ပါပြီးသား Program အသေးလေးတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Notepad မှာ အရင်ရိုက်ပြီးမှ Copy ကူးယူပါ။ပြီးမှ မိမိတို့ အသုံးပြုမယ့်နေရာမှာ Paste ချပြီး Mouse ကိုသုံးပြီး Login လုပ်ပါ။User နဲ့ Password တွေ ရိုက်တဲ့နေရာမှာလည်း ဟတ်ကာတွေမျက်စိလည်အောင် အခြားအပိုစာလုံးတွေပါ ရိုက်ထည့်ပြီးမှ ပြန်ဖျက်ယူပါ။ဒါဆိုရင် ဟတ်ကာဟာ Password ရယ်လို့ အတိအကျမသိနိုင်တော့ပါဘူး။
Password ပေးတဲ့နေရာမှာ ရိုးရှင်းတဲ့စာလုံးတွေကိုမသုံးဘဲ !@#$%^&* စာတာတွေ ကြားညှပ်ထည့်ပေးပါ။ဘာလို့ အဲ့လိုစာလုံးတွေထည့်ခိုင်းရလဲဆိုတော့ Facebook Hacker လို Software မျိုးနဲ့ ဟတ်တဲ့အခါမှာ အဲ့လိုစကားလုံးတွေက Software အတွက် ရှာဖွေရခက်ခဲနေတက်ပါတယ်။အခုဆို Facebook လည်း တစ်နေ့ထပ်တစ်နေ့ Security တွေ မြင့်သည်ထပ် မြင့်လာပါပြီ။Facebook မှာဆို Password ကိုမြန်မာလိုတွေပါ ထည့်ပေးနိုင်ပါတယ်။Keylogger တွေအများစုဟာ ကီးဘုတ်က စာလုံးတွေအကုန်လုံးကိုမှတ်သားနိုင်တယ်ဆိုပေမယ့် မြန်မာဖေါင့်ကိုတော့ သူတို့ နားမလည်ကြတဲ့အတွက် မမှတ်သားနိုင်ပါဘူး။
credit to မအူပင်သားလေး
ref: ( http://aungsanmks.blogspot.com/2013/04/blog-post_7.html )
မူရင်းလင့်လေးမှာတော့ ပုံလေးတွေနဲ့ ရှင်းပြပေးထားပါတယ်။